Ngaba i-Pro Pro entsha inokutshintsha indawo yedesktop yeMac? | Ndisuka mac
Ngaba i-iPad Pro entsha inokutshintsha indawo yedesktop yeMac?
UJavier Porcar | | iPad, Iikhompyuter zeMac, Ezahlukeneyo
U-Apple usandula ukwazisa i-Pro Pro entsha.Iyona nto intsha intsha bubungakanani bayo obutsha. Ukusukela namhlanje, sine-10,5 ″ i-iPad, ubungakanani obuqwalaselwa yinkampani eneapile yokulunywa, ngokweemfuno zangoku, ubungakanani obugqibeleleyo phakathi kokungafani, ubungakanani kunye nobunzima. Phakathi kwezinto ezintsha sifumana ikhibhodi entsha ehlala kwiscreen sonke, nokuba sisebenzisa i-iPad ngokuthe tye. Yintoni egqithisile sine-6-core processor. Kungenxa yoko le nto sizibuza lo mbuzo ulandelayo: Ngaba le iPad ine-iOS 11 inokutshintsha iMac?
Inokuba yeyenye efanelekileyo kubasebenzisi abaninzi, kodwa ngokoluvo lwam sisixhobo esincedisayo. Ukuba ungumsebenzisi ofuna ukuphatheka ngokupheleleyo, unikezela usuku lwakho kwimini ujonga umxholo wee-audiovisual, kuya kufuneka unxibelelane neenethiwekhi zentlalo okanye uyilo, kunokwenzeka ukuba izixhobo zakho eziphambili yiPad Pro entsha. ithebhulethi yeApple ine:
Amanqanaba okuhlaziya isikrini ukuya kuthi ga kwi-120hz, njengamabonakude egumbi lokuhlala ahamba phambili namhlanje.
Imifanekiso ye-HDR, Ekuphakameni kwee-4k zethelevishini zomzuzu.
Amandla e 6-core chip, Ehlala ukuya phezulu okanye ide ibethe amanqaku amaninzi e-compact kwimarike.
Ikhamera ye-12MP ngasemva, kunye nozinzo kunye nokuqaqamba 1,8 f. Ngaphambili, akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi kwe-7 Mb.
Kodwa mhlawumbi inoveli enkulu iza kuvela kwisandla se-iOS 11. IPad Pro entsha ibandakanya izinto ezibalulekileyo zeMacOS kule mihla yethu: Isifumani, esineenguqulelo zayo ze-iOS iifayile. Umsebenzi we Dragra and drop (ikopi kwaye ulahle): okokuqala sinokutsala into ukusuka kwenye iwindow ukuya kwenye okanye ukusuka kwesinye isicelo ukuya kwesinye. Okokugqibela, uguqulelo lwe Dock MacOS okanye Ulawulo loMsebenzi.
Nangona kunjalo, ndicinga ukuba inde indlela ekusafuneka ihanjwe ngaphambi kokuba ithebhulethi "ingadla" iMac. Okokuqala kuyo yonke imibuzo isithuba: uya kuhlala unememori engaphezulu, iprosesa kunye nokungenisa umoya kweyona incinci yeMacBooks kwaye ke kunamandla ngakumbi ukwenza imisebenzi ethile. Okwesibini, ikhusiIsikrini esikhudlwana sisoloko sisebenza ngakumbi kungekuphela kukubona isikrini ngcono, kodwa Ukuba uhlengahlengisa indawo kunye nezicelo ezininzi ngaxeshanye kwidesktop yethu, okanye kwiidesika, Ewe, masikhumbule ukuba kwiiMacOs sinenani elingenamda lezikrini.
Sishiya ividiyo epapashwe yiApple ngokubhekisele kwiPad Pro ukuze uzenzele izigqibo. Kwelam icala nasemva kokwenza eli nqaku, ndisacinga ukuba ziyahambelana kwaye ayizongena endaweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Ngaba i-iPad Pro entsha inokutshintsha indawo yedesktop yeMac?
Hayi, kodwa iMacbook encinci, kunjalo.
ULuis Silva sitsho
Haha ayisoze. Kutheni le nto ii -apps ezenza "yonke into" kwi-iPad zithathwa njengamava apheleleyo? Ubuncinci njengenkqubo nditsho njalo, okoko nje ndingenayo iapp endivumela ukuba ndibhale kwaye ndidibanise inkqubo kwi-iPad efanayo, i
efanayo ngekhe ithathe indawo yeMac yam
Phendula uLuis Silva
Ekugqibeleni iMacBook Air iyasinda kwiminyaka embalwa